राजेश विद्रोही/सप्तरी, ३१ वैशाख । सप्तरी सुरूंगा नगरपालिका–३, विसनरिया दहमा १५ वर्षदेखि घर बनाएर बसेका दलित मुसहर बस्तीमा पटक–पटक बस्ती भत्काउन आईपुग्छन् ठूलाबडाहरू । स्थानीय पाँचु सदायका अनुसार एक वर्षअगाडि गाउँका ठूलाबडा जमिन्दारहरूको उस्काहटमा वन डिभिजनका कर्मचारीहरू आएर स्थानीय विहारी सदाय, बसन्ता सदाय, तेजीलाल मण्डल, उपेन्द्र सदाय, कान्छा सदाय, दुखि मण्डल लगायत ८ जनालाई समातेर लगे । ती महिना जेलमा राखे । पछि २० हजार धरौटीमा छोडियो तर अहिलेसम्म आदालतमा तारेख धाईरहेका छन् । त्यस दिन कनकपुर गाउँबाट पाहुना आएका सुन्दर सदाय पनि पक्राउ परेका थिए । अहिले उनी पनि तारेख धाइरहेका छन् ।
‘हाम्रो पक्षमा बोलिदिने कोहि छैन् । हामीसँग एक धुर जग्गा छैन् । बालबच्चा कहाँ लाने हो,’ स्थानीय पाँचु सदाय भन्छन्, ‘कसरी जीवन बाँच्ने ? मानसिक तनाव थोपरिएको छ । विभिन्न बाहानामा कानुनी फन्दामा फसाएर हैरान पार्छन् ठूलावडाहरुले । प्रशासनिक हैरानीले कमाएर खाने फुर्सद दिँदैनन् ।;
वडाको बजेट वडाअध्यक्ष रूद्र कार्कीले बस्ति नजिकै रहेको दह (पोखरी) खन्नमा प्रयोग गरे । अहिले पनि जंगलभित्र पोखरी खन्न डोजर चलिरहेको छ । पोखरी ठूलो छ । तर, त्यसको नाममा नजिकै रहेको फलिफलाउ आँपको रूख र मानिसको बस्ती भत्काउन थालिएको छ । ती घर भत्काउन कहिले फकाएर दवाव दिइन्छ त कहिले धम्क्याएर । आफ्नै जनप्रतिनिधिले जातिय विभेद गरिरहेको स्थानीयहरु गुनासो गर्छन् ।
स्थानीयले बस्तीको संरक्षणको कुरा गर्दा आफ्नो नेतालाई गएर भनुस्. हामी केहि जान्दैनौं भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले बेवास्ता गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिहरु आफूहरु आफ्नै जाति र पैसा लगानी गरेर जितेको खुलम्खुला बताउने गरेको एक स्थानीयले बताए । ‘अब हामी आफ्नो समस्या कहाँ राख्ने ?,’ स्थानीय सुकनी सदाय प्रश्न गर्छिन्, ‘मुसहर, चमार र मण्डलगरी यहाँ ६१ घर दलितको बस्ति छ । यहाँ बारम्बार बस्ती हटाउन दवाव दिइरहेको छ । हामी काँ जानु ?’
तीन तहको निर्वाचनपश्चात् जनतामा आस्वासन बाँडेर शहर पसेका नेताहरू यतिबेला गाउँबस्तीमा पुरानै ढर्राको राजनीतिक चलखेल गरिरहेका छन् । जनताका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । समाजिक विकासको कार्यमा स्थानीय जनतासँग कुनै सल्लाह गर्नै चाहँदैनन् । उनीहरु आफूखुशी गरिरहेका छन् ।
गाउँबस्तीलाई व्यवस्थित गर्नुभन्दा उजाड गर्ने र बिगार्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएका छन् । विकासको नाममा धनीपतिहरुले सार्वजनिक एलानी जग्गालाई मनपर्दी छेकबार गरिरहेका छन् । पोखरी खन्ने, मन्दिर बनाउने लगायतका काम गरेर भूमिहिन सुकुमबासीहरूलाई भूमि र घरबासबाट बन्चित गरिरहेका छन् । मान्छेलाई बस्ने जग्गा छैन् यहाँ तर, धर्मको नाममा भएका जग्गामा पनि पोखरी खन्ने, पार्टीपौवा, चौतारा, मठमन्दिर लगायतका निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छन् । भूमिहिन सुकुमवासी बस्तीमा लालपुर्जा दिनु र व्यवस्थित वसोवासका लागि प्लानिंग गर्नुको साटो रोड फराकिलो गर्ने नाममा बस्ति भत्काउने चलखेल भैरहेको छ ।